Baarlamaanka Puntland Oo Qalqaalinaya Sidii Go’aan Ay Uga Gaari Lahaayeen Dowladda Federaalka – Goobjoog News
Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta kulan ballaaran waxa ay ku yeesheen magaalada Garoowe, kaasi oo looga hadlay arimo ku aadan xiriirka dowladda Federaalka iyo maamulka Puntland.
Waxaa hadallo kulankaasi ka jeediyay mudanayaasha baarlamaanka Puntland, iyaga oo soo jeediyay in go’aan kama dambeys ah in laga qaato dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanadaan ayaa sheegay in markaana aysan jiri doonin digniin loo jeediyo dowladda Federaalka, balse waxa la doonayo ay tahay go’aan cad oo laga qaato waa sida ay hadalka u dhigeene.
“Waxaan qabaa in go’aan cad laga gaaro dowladda Federaalka, walibana aan mar kale digniin la siin, maxaa yeelay waxa ay ku tunteen dastuurkii dalka u yaallay” sidaasi waxaa yiri mudane ka tirsan baarlamaanka Puntland.
Xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in kulankaan midka xiga looga yeerayo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku xigeenkiisa, su’aalana laga weydiiyo siyaasadda hadda ay kula shaqeeyaan dowladda Federaalka, ka dibna lasoo saaro go’aan kama dambeys ah.
Golaha Wasiirada Oo Guddi u Saaray Walaaca Culimada Ee Sharciga Gender-ka (Sawirro)
Muuqaal:-Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Shirka Dhab U Heshiisiinta Soomaaliya Iyo Somaliland
Maleeshiyaad Hubeysan Oo Maalintii Saddexaad u Xiran Tahay Wadooyinka Baladweyne
Gyeecn ndjlvr online cialis coupon for cialis
Kpdurr buebfw Brand name cialis overnight generic cialis 2019
Wjokyo qdguvi Buy generic viagra online generic cialis 2019
Yyxsvv ymiuxr discount cialis generic cialis online
Gsyfzc mxnkdc Best price cialis online pharmacy
Wgecyd jtkjje Get viagra walmart pharmacy
Leave a Reply to cialis 5mg price Cancel reply
Faah Faahin: Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Iyo Walaalkiis Oo Lagu Diley Muqdisho
buy generic 100mg viagra online canadian pharmacy viagra buy...
viagra 100mg buy viagra order viagra online...
amazon viagra generic viagra buying viagra online...
cheapest generic viagra canadian pharmacy viagra walmart via...
where can i buy viagra over the counter generic viagra gener...